downloads 18 965
Onodi ntu Lockheed Martin X-35B_M4.7. VTOL ugbo elu dị ka Harrier. Chernobyl swings ala. Kacha nta ọsọ: 5 Kts. -Abịa na otu repaint. Anwụrụ ọkụ mmetụta dị nnọọ mere nke ọma. Udidi kama mfe, ma ikenyeneke mbiet ụgbọ elu nlereanya. ezi mmetụta na VTOL mode. Ị ga-ama ka esi ejikwa ihe joystick idebe ya anyịnya. Iji mee ka VTOL mode pịa (F8).
Dị nnọọ mma ụda. Ekele ndị dere maka oké ọrụ!
The X-35 bụ ibuo ugbo elu mepụtara Lockheed Martin maka JSF omume: Joint Ebu Agha. Ọ e kwuru na mmeri megide Boeing X-32. Ọ ga-aga n'ime mmepụta n'okpuru designation F-35 Lightning II. The obere takeoff na vetikal ọdịda bụ isi atụmatụ nke a version. The ngwọta engine ma ọ bụ kemeghi ugboelu nozzles dị ka AV-8 Harrier II e tụfuru atụfu. Kama nke ahụ, ndị X-35B nwere a fan ekwesị ike na fuselage AFT nke kokpiiti naanị eji maka takeoff ma ọ bụ ọdịda. Ọ e mere site Lockheed Martin na mepụtara apụta-Royce na mmekorita-eduga na UK1.
Na a isi nozulu swiveled ala, na onye ofufe na jikọọ na ala nsogbu tobaim nke isi chernobyl. Esịtidem ikike mmanụ ụgbọala na-ebelata ka 6.35 tọn. N'ozuzu arụmọrụ na-dịtụ belata, ma nke a bụ nke funahụrụ ha n'ihi a STOVL ugbo elu.
The engine nwekwara nwere uru nke churn ikuku oyi na iji nwayọọ. Ọ bụ ya mere adịchaghị emebi gburugburu superstructure ọdụ runway ma ọ bụ ụgbọelu ụgbọelu.
Kasị doo anya ngosipụta e nyere n'oge ikpeazụ ule na JSF omume. The X-35B anya na-erughị 170 m (500 feet), ghọtara a supersonic ụgbọ elu na enweta verticalement2. A mgbagwoju nhazi rụrụ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru okè mgbe anwale. Ọ bụ a bụrụkwa ihe na mmeri nke X-35 JSF omume.
The X-35B prototype (na mbụ X-35A) bụ now Udvar edochaghị anya ngosi nka Museum nso Dulles Airport ke Virginia. (Wikipedia)
Onye edemede: Colin Thwaites et Claudio Mussner